Imvula ye-Asphaltene iqalisa izinkinga eziningi ekukhiqizweni kukawoyela ngokunciphisa ukungena, ngokushintsha ukuthambeka kwamatshe echibini, ukuvinjelwa kahle kanye nokudala ukwehla okukhulu kwengcindezi okuzungeze umkhiqizo kahle. I-Ultrasonic asphaltene deagglomeration nokusabalalisa kuvimbela futhi kulungise ukwakheka kwama-asphaltene flocs nokufakwa kwawo.
Inkinga: Ama-asphaltenes Kumafutha Angahluziwe
I-Asphaltene iyisipho esiqinile kumafutha ongahluziwe athathwa njenganenkinga ngoba idala izinkinga ezinzima ngesikhathi sokukhiqizwa nokuthuthwa kwenqola ephuma emthonjeni wokumba. Ama-asphaltenes ayisigaba esiyinkimbinkimbi kakhulu sama-molecule futhi avela ezinhlakeni ezihlukile zamangqamuzana – isici esinomthelela enkingeni njengoba izinhlobo ezahlukahlukene ze-asphaltene zidala izinkinga ngamazinga ahlukene obukhali. Izakhiwo eziningi ze-Asphaltene futhi zenza kube nzima ukuyenza ibe ngumndeni othize. Ngakho-ke, i-asphaltene imvamisa ihlukaniswa njengesigaba sokuncibilika, ngoba ibonakala njengokungenakunyibilika kuma-n-alkanes.
Izinkinga ezijwayelekile ezibangelwa ama-asphaltenes ku-oyela ongahluziwe, isib.
Ukuhlanganiswa kwe-Asphaltene ne-flocculation okuvezwe kumodeli ye-Yen.
Ngokuzithoba kuka-O. Mullins, uSchlumberger.
Iprosesa ye-ultrasonic UIP16000 iyi-homogenizer yokusebenza okuphezulu yokwelashwa kukawoyela ongahluziwe
Isixazululo: Ukuncishiswa kwe-Ultrasonic kwe-Asphaltene Precipitates
Izinhlayiya ze-asphaltene ezincishisiwe nezingasuswa zingalungiswa ngokuthembekile ngamandla e-ultrasonication. I-high-perfromance ultrasonication iphula i-asphaltene preciptates bese ifohla phansi iye kusayizi wezinhlayiyana ezincane. Ngaleyo ndlela, i-asphaltene ihlukaniswe yabuya yaya kuzinhlayiya ezincane kakhulu, ezingavimbi noma eziphazamise ukucubungula okungcolile. Ama-ultrasonic dispersers homogenize izinhlayiya emafutheni angcolile. Imvamisa kufakwa isiqinisi samakhemikhali ukuthola ukuzinza kwesikhathi eside. Lokhu kusho ukuthi, i-ultrasonication inganciphisa ukwakheka kwe-asphaltene, okuvimbela ukubekwa kwe-asphaltene ezindaweni, i-pore plug echibini, ukuxhuma kahle kwe-wellbore nokwakha amapayipi.
Ukuphela kwezikhukhula ze-brine ngaphansi kwamagagasi e-ultrasonic ezindaweni ezahlukahlukene zemodeli encane.
Ukufunda ne-copyright: UDeshibi et al. 2018 (I-CC BY-NC-ND 4.0)
Izinzuzo Zokuncishiswa Kosayizi We-Ultrasonic Asphaltene
Ukuncishiswa kosayizi wezinhlayiyana ze-asphaltene
Ukudiliza ama-asphaltene agglomerates
Ukwehliswa kwe-viscosity kokungahluziwe
Ukufakwa kwe-Ultrasonic kwe-3x I-UIP1000hdT ukucutshungulwa kukawoyela ongahluziwe
Ucwaningo Lukhombisa Ukusebenza Ngokuncipha Kwe-Ultrasonic Asphaltene
UDehshibi et al. (2018) ufunde ngemiphumela yemvamisa ephansi, i-high-power ultrasonication (30kHz) kwi-asphaltene precipitation / flocculation kanye nokufakwa ngaphansi kokulawulwa kokushisa. I-Ultrasonication inciphise ukubekwa kwe-asphaltene. Amagagasi e-Ultrasonic kanye ne-acoustic acavation ekhiqizwayo kubangele ukwanda komkhiqizo kawoyela ngendlela yokubeka uwoyela. Ngokusebenzisa ukwelashwa kwe-sonication kwakungenakwenzeka kuphela ukuhlukanisa ama-asphaltene agglomerates, kepha nokuguqula ukubekwa kwe-asphaltene.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwe-ultrasonication kungavimbela ukuvinjelwa komphimbo nama-pores nge-asphaltene enkulu ehlanganisiwe. Ngaleyo ndlela, ukwehla kwengcindezi ngenxa yokufakwa kwe-asphaltene kwagwenywa futhi ukugeleza koketshezi kuma-pores nasemphinjeni kwenziwa ngcono. Kusetshenziswa ukuhlaziywa kwesithombe kutholakale ukuthi ngenxa yokusebenzisa i-ultrasound yamandla cishe i-80% ye-asphaltene eqhamukile ayifakwanga. "Ngamanye amagama, ama-80% we-asphaltene deposition anciphile futhi ngenxa yalokho amathuba okuvalwa kweziteshi ezincane anciphisa ngenxa yokusebenzisa i-ultrasonic." (UDehshibi et al., 2018)
Okutholakele ocwaningweni lweqembu lokucwaninga likaDeshibi kukhombisile ukuthi ukudlidliza kwe-ultrasonic kanye nokudlidliza kwe-cavitation kungasusa ukuhlanganiswa okukhulu kwe-asphaltene kusuka ezindaweni bese kubayisa ekuhambeni okukhulu. Ngaphezu kwalokho, ukucutshungulwa kwe-ultrasonic kunciphise inani le-asphaltene ehlanganisiwe (bona isithombe esingezansi). Ngokuya ngokuhlaziywa kwesithombe, cishe i-70% ye-asphaltene egxilile ngeke ifakwe ngenxa yokuthobela uhlelo ku-sonication.
Ukuphela kwe-brine (isisombululo se-magnesium chloride) izikhukhula ngaphansi kwamagagasi e-ultrasound irradiation: (a) ukubuyiselwa emuva kokufakwa kwe-asphaltene (b) ukususwa kwe-asphaltene.
Ukufunda ne-copyright: Deshibi et al. 2018 (I-CC BY-NC-ND 4.0)
I-Hielscher Ultrasonics ikhethekile kwezentuthuko, ukwenza prototyping, ukukhiqiza kanye nokusabalalisa ama-processor asebenza nge-ultrasonic wezinhlelo zokusebenza ezisindayo. Ngenxa yokusebenza okwehlukile, ukukhuthazela, ukuqina, kanye nokwethembeka, izinhlelo ze-Hielscher ze-ultrasonic zifakiwe kuzinhlelo zokusebenza ze-petro-chemical emhlabeni jikelele. Izicelo ezijwayelekile zifaka phakathi ukusizwa kwe-oxidative desulphurization ye-ultrasonically, i-emulsification kawoyela ongahluziwe, i-asphaltene deagglomeration, ukuhlakazeka kwe-scavenger, kanye nokwehliswa kwe-viscosity kawoyela osindayo. I-Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimbonini e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu, adingekayo ekusetshenzisweni komsebenzi osindayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic akhethiwe ayatholakala. Izinhlelo zezimboni zikaHielscher ziphatha kalula ama-viscosities aphezulu kakhulu futhi zidinga ukunakekelwa okuphansi kuphela.
Xhumana nathi manje ukuthola eminye imininingwane mayelana nokuncishiswa kwe-asphaltene ye-ultrasonic, izinketho zokufaka kanye namanani! Abaqeqeshwe kahle bethu, abanolwazi olude bazokuthokozela ukuxoxa nawe ngezidingo zenqubo yakho!
Ama-asphaltenes aqukethe ikakhulu i-carbon, i-hydrogen, i-nitrogen, i-oxygen, nesibabule, kanye nomkhondo we-vanadium kanye ne-nickel. Isilinganiso se-C: H silinganiselwa ku-1: 1.2, kepha siyehluka ngokuya ngomthombo we-asphaltene. I-Asphaltene ichazwa ngokuthi “ingxenye esindayo kunazo zonke ziketshezi likaphethiloli elingancibiliki ekukhanyeni okungama-alkanes njenge-n-pentane noma i-n-heptane, kodwa incibilika kuma-aromatics afana ne-toluene” (Goual 2012)
I-Asphaltene ingabonakala futhi ihlukaniswe ngezici ezilandelayo:
Okuqinile: I-Asphaltene yisigaba esiqinile esakhiwe ngokufana no-oyela ongahluziwe ezimweni zamachibi.
I-n-Alkane ayikwazi ukuncibilika: I-Asphaltene ibhekwa njengesigaba sokuncibilika kwento njengoba inezinhlaka eziningana, ngakho-ke, kunzima kakhulu ukuyinikeza isakhiwo esijwayelekile. Ngakho-ke ichazwa njengengxenye enkulu yesisindo samangqamuzana kuwoyela ongahluziwe ongancibiliki ekukhanyeni okungama-alkanes njenge-n-pentane noma i-n-heptane futhi oncibilikayo kuma-aromatics afana ne-toluene noma i-xylene.
I-polar ephezulu kakhulu: I-Asphaltene ingenye yezingxenye ezimbalwa kakhulu zikawoyela ongahluziwe opholile kakhulu, ngokungafani nowoyela ongahluziwe wonkana, obhekwa njengongaphephuli.
I-Heteroatoms: I-Asphaltene ihlotshaniswa ne-hetero-athomu, ikakhulu ebonakaliswa ku-nitrogen, oxygen, nesulfure.
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngama-homogenizers asebenza ngokusezingeni eliphezulu avela ku- I-Lab kuya Izimboni usayizi.